Amarka Qadada / Xogta Qaadashada - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka waxay siisaa cunnooyin ardaydaas kaqeyb qaadata barashada elektarooniga ah usbuuca.
Xirmooyinka cuntada ayaa u baahan in horay loo dalbado. Hal amar ardaykiiba ayaa loo baahan doonaa in la dhammaystiro.
Kaliya waalidka ama ilaaliyaha ardayga ayaa loo oggol yahay inay soo qaataan cuntada.
USDA waxay ku dhawaaqday barnaamij muddo gaaban ah oo u oggolaanaya Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka inay siiso cunno bilaash ah iskuulka dhammaan ardayda maalintooda elektaroonigga ah. Markuu barnaamijkani dhammaado, Minnetonka wuxuu sii wadi doonaa inuu cunnada u siiyo ardayda waxaanan kula socodsiin doonnaa dhammaan isbeddelada dhaca ee xilligaas dhaca.
Waxaad soo qaadaneysaa cuntada inta maalmood ee ardaygaagu kaqeyb qaadanayo barashada elektaroonigga ah. Waxaan sidoo kale ku soo dari doonnaa cunno xirmooyinka dhammaadka wiigga, iyo maalmaha aan dugsiga ahayn.
Cimilada oo aad u qabow awgeed iyo ciriiriga taraafikada ee ka jira albaabka laga galo Galbeedka, waxaan isbedel ku sameynay waqtiga soo qaadista iyo goobta Dugsiga Sare.
Soo qaadku waa Arbacada. Waxaa jiri doona HAL meel laga wado oo duhurkii ah - 1:00 PM. Fadlan la soco waqtigan ISBEDELKA.
ISBEDELKA BULSHADA DUGSIGA SARE:
Dugsiga Sare ee Minnetonka - Gelitaanka EAST
Fadlan raac calaamadaha si aad uga soo gasho Dugsiga Sare meesha laga soo galo ee Bariga fog (oo ku taal jidka loo maro). Waxaad ka heli doontaa khariidad emailkaaga xaqiijinta oo muujinaya aagga cusub ee kor u qaadista.
Fadlan ku sii jir gaarigaaga illaa iyo inta aad ka noqoneyso gaariga ugu horreeya ee safka ku jira oo lagu farayo inaad ka tagto gaarigaaga. Markay tahay waqtigaaga inaad soo qaadato qadadaada, fadlan u soco albaabka 15E oo sheeg magaca waalidka ee ugu dambeeya ee lagu amro. Maaskarada waxaa looga baahan yahay inay soo qaataan xirmooyinka cuntadaada.
Fadlan buuxi foomka dalabka ugu dambeyn 2pm Isniinta si aad u soo qaadato Arbacada.
Waxaad heli doontaa xaqiijin iimeyl subaxa soo-qaadista.
Foomka dalabka waxaa laga heli karaa: https://tinyurl.com/MinnetonkaLunchOrder
Si aad u daawato waxyaabaha ka kooban iyo xasaasiyadda guji: Waxyaabaha ay ka kooban tahay Cunnada Kit Kit